somali_glossary / Minnesota.gov
Waxa jira 13 nooc oo ah noocyada la ilaaliyo oo lagu sharaxay Qodobka Xuquuqul Iisaanka Menesota. Noocyadani waxay ka kooban yihiin dad leh astaamo gaara, sida jinsiyad, diin, lab ama dhidig, waa tusaale ahaan oo kale.
Jinsiyad: sida Caddaan, Madow, Aasiyaan, ama Hindida America. Dadka qaar ayaa isku arkay inay ka tirsan yihiin dhowr jinsiyadood.
Midab: Midabka jidhka
Mabda: hab nidaameed wax lagu aamino. Mabda wuxuu aad muhiim ugu yahay qofka rumaysan. Mabdu waa sida diinta oo kale, laakiin ma"aha waxa la xidhiidha ilaahay ama ilaahyo.
Diin: Dhowr arimood oo aad aaminsan tahay, qiimaha, iyo ku dhaqanka ku salaysan aqoonta hogaan diimeed. Diintu waa wax la xidhiidha ilaahay ama ilaahyo.
Halka Aad ka timid: qaybta aad adduunka ka timid, ama halka tafiirtaadu ku noolayd.
Lab ama Dhedig: inuu qof yahay laba ama dhidig
Inaad Reer Leedahay iyo in Kale: Inaad tahay doob, xaas leedahay ama aad kala tagteen.
La"xaad la"aan: qofku wuxuu leeyahay la"xaad la"aan hadii uu:
Isaga ama iyadu jisimka, dareemayaasha &ndash; indha la"aanta ama dhaga la"aanta, tusaale ahaan &ndash; ama leh la"xaad la"aan xagga maskaxda ah; iyo
Laxaad la"aantani oo "qalab ahaan usuurto galinwayda" ("materially interferes") ama ha hortagta dhaqdhaqaaqa ugu wayn mid ka mida nolosha; ama
Isaga ama iyadu taariikh uleh laxaad la"aantani; ama
Isaga ama iyadu aqoonsan tahay inuu leeyahay ama leedahay la"xaad la"aantani.
Nabar kasta ama xanuunkastaa ma noqon karo "la"xaad la"aan" ("disability") marka loo eego Qodobka Xuquuqul Iisaanka Menesota.
Taakulaynta Dadwaynaha: kuwani waa barnaamijyo dawladeed oo caawiya dadka lacagta soo gashaa yar tahay ama leh baahi gaara. Tusaale yaal ku saabsan taakulaynta dadwaynuhu waxa ka mida:
Taakulaynta Caafimaadka ama Gargaarka Caafimaadka
Taageerada Raashinka (Lacagta caydha)
Barnaamijka Maal Gelinta Qoyska Menesota (MFIP: Minnesota Family Investment Program)
Lacagta Dheeraadka ah ee Howl Gabka (SSI: Supplemental Security Income)
Taakulaynta Guryahay Dawlada Dhexe ama Qaybta Taakulanta 8 (Section 8)
Taakulaynta Tamarta Guriga ee Dadka Lacagta Soo Gashaa Yar Tahay (LIHEAP: Low Income Home Energy Assistance)
Barnaamijka Maalinta Qadada Qaranka Iskuulka barnaamijka qadada bilaashka ah
Da: Da"daadu waa intay tahay. Noocani waxa laga ilaaliyaa laba meelood oo kaliya, shaqada iyo waxbarashada. Hadii qof da yari ilmo da"diisu ka hoosayso 18 jir doonayo inuu xareeyo dacwad, waa in waalid uu leeyahay ama qof sharci ahaan ka wakiila u qabto.
Nooca aad tahay Lab iyo Dhidig ama Wixii u Dhaxeeya: Waa sharci daro inuu qof kugu takooro maadaamo loo malaynayo inaad tahay ragga ragga u taga, dumarka dumarka u taga, ama aad caadi tahay ama aad labada dhinacba tahay ama isku eekaysiiya wuxuu yahay maahee wax kale.
Heerka Qoysku Taagan Yahay: Qof caruur wata da"doodu ka hoosayso 18 jir lana nool. Guud ahaan, qofka guriga kireeya uma diidi karo inuu guri ka kireeyo waalidka caruurta leh. Noocani waxa loo ilaaliyaa oo kaliya dhinaca guriyeynta.
Dhaqdhaqaaqa Gudida Xuquuqul Iinsaanka ee Deegaanka: Laguguma takoori karo waayo waxaad u adeegtaa gudida xuquuql iisaanka deegaanka. Noocani waxa la ilaaliyaa oo kaliya markay timaado dhinaca shaqada.
Qodobka Xuquuqul Iisaanka Menesota wuxuu sharaxaa meelaha aan laga ogolayn takoorka. Kuwani waxa loo yaqaan "meelaha la ilaaliyo."
Shaqada: halkaad ka shaqaysid, ama shaqada aad dalbanaysid
Guriyeynta: guriga aad kiraysanaysid, ama guriga aad iibsanaysid. Guriyeynta waxa kale oo loo yaqaan "hantida dhabta ah" ("real property").
Qaabilaada Dadwaynaha: meel kasta oo guud ahaanaba u furan dadwaynaha, sida:
Meelaha daryeelka Maalintii
Adeega Dadwaynaha: meel ama adeeg ay wado dawladu. Tusaale yaal waxa noqon kara kuwani:
Bilayska iyo Laamaha Dab Demiska
Magaalada, degmada, iyo Laanta Caafimaadka Gobolka
Waxbarashada: Meel kasta oo ah meelaha dadwaynaha ama meel gaara, iskuula, ama kuliyad, jaamacad ama farsamada gacanta.
Amaah: Urur bixiya amaahda,sida bangiga oo kale ama ururka amaahda
Ganacsiga: hadii aad leedahay meel ganacsi, ganacsatada kale kuma takoori karto
Qaamuus (PDF 185kb)